ID3 Editor -Cleaning ma na-ahazi gị music bụ na ọ dịghị mfe! t
ID3 Editor Hichaa Your Music Collections
Echefuola album & Cover, duplicated tracks ...? Ọ bụghịkwa ọzọ!
The isi ọwụwa ị nwere ike ma ọ bụrụ na ị nwere nnukwu music Akwụkwọ:
Dị nnọọ họrọ Music Player / Manager ị na-eji:
Na iTunes Ọ dịghị iTunes
Apple ọrụ na-emekarị na-ahọrọ na-akpọ ha music na iTunes. Ma iTunes naanị ike adịghị jikwaa a nnukwu ọbá akwụkwọ na-achọ n'èzí enyemaka. Ụfọdụ ọrụ na-adịghị nsogbu site depụtara nsogbu, ma n'ihi na a onye hụrụ music ya isi; nsogbu ndị a nwere ike n'ezie ga-esi ya n'ime a Pịkụl. ID3 Editor e mere maka ndị a music ndị hụrụ.
1 Họrọ A Aka ID3 Editor
Best ID3 Editor maka iTunes
• nyochara na ọcha gị music n'ọbá akwụkwọ na otu click
• Download ma ọ bụ ndekọ music si music saịtị
• Jikwaa Music enweghị iTunes Mmachibido
• Ekekọrịta Your iTunes Playlist na One-click
Download ugbu a Download ugbu a
Top 3 nsogbu music mkpado na iTunes:
• Mgbe iTunes 12, ma ọ bụrụ na ọrụ dezie id3 Tags na iTunes, ihe ọmụma bụ nanị ihe e dere iTunes n'ọbá akwụkwọ. Nke a pụtara na ọ bụrụ na ị chọrọ igwu egwu egwu gị na ọzọ ọkpụkpọ, na Id3 mkpado ndị adịghị.
• Ọtụtụ ndị nwere otutu music! Ya mere ọ bụrụ ha na-amalite edezi id3 mkpado aka, ọ ga-ewe ruo mgbe ebighị ebi.
• ọzọ nkịtị nke bụ na ọ bụrụ na onye ọrụ edits ya id3 mkpado aka na iTunes, a ga-enweghị cover maka ndị tracks.
2 Hichaa iTunes music n'ọbá akwụkwọ
• Idozi ịnakọta na efu ma ọ bụ na-ekwesịghị ịdị na mkpado na-akpaghị aka, dị ka "na-amaghị na-ese" na "Track 01". Ị nwekwara ike dezie music mkpado aka.
• Wet ke achozi album cover nkà na otu click, na-eme gị music n'ọbá akwụkwọ anya zuru okè.
• Ọ dịghị ihe ọzọ ebipụ mgbe egwu na-akpọ gị iTunes music ruru ka efu iTunes tracks. One-pịa-ewepụ ihe niile na-efu tracks.
• duplicated music faịlụ na iTunes pụrụ ịbụ ezigbo ihe mgbu. Wepụ oyiri iTunes songs na-gị iTunes n'ọbá akwụkwọ ọhụrụ ma dị ọcha.
Ọzọ informations banyere TunesGo ebe a.
• wughachi iTunes n'ọbá akwụkwọ
• Tinye sere itunes
• iTunes Ọhazi
• Idozi iTunes Library
• Chọta na Wepụ oyiri
Ọ dịghị iTunes
N'ihi na ọrụ na-akpọ ụbọ ọzọ Player, bụ isi nsogbu bụ na a otutu ha music furu efu id3 mkpado ma ọ bụ nwere ọtụtụ duplicates ahụ n'ọbá akwụkwọ, karịsịa n'ihi na ọrụ na nnukwu n'ọbá akwụkwọ. Edezi ha otu na oge ga-achọ mgbalị dị ukwuu. Ọma na nke a bụ tupu ọhụrụ ID3 Editor ama debuted.
Bulite gị ọdịyo faịlụ na free online ngwa ka nyegharịa ma dezie ID3 mkpado
Dezie, nyegharịa ma ọ bụ wepu ọmụma kpam kpam na na-agbakwunyere na ID3 format n'ime ọdịyo faịlụ
Mfe iji freeware online ngwa na-enyere gị dezie metadata echekwara na ID3 format ke ọdịyo faịlụ
The ID3 Tag Editor bụ a free software na ike ga-eji maka ma onye na azụmahịa nzube
ID3-TagIT bụ a free software na a na-eji nyegharịa ma dezie metadata nke ID3 mkpado na MP3 faịlụ.
Stamp ID3 Tag Editor-enyere gị aka nyegharịa, dezie na ihichapụ metadata agbakwunyere n'ime ọdịyo faịlụ.
N'ihi na Windows Ọrụ
Mgbe Windows ọrụ download a otutu music ke otu laa, ha na-ahụ duplicates ha diski ike. Duplicates bụ otu n'ime ihe ndị kasị mgbakasi ihe nwere na gị playlist. Bụghị nanị na ha na-n'elu uwa, kamakwa n'iyi obi ụtọ nke a haziri ahazi playlist ntị. Ọfọn, ọ dịghị ihe na-echegbu maka Windows ọrụ, ọhụrụ ID3 Editor-abịakwute gị ọsọ enyemaka!
Wepụ oyiri Ngwá Ọrụ maka Windows
• Chọpụta ngwa ngwa niile yiri ma ọ bụ kpọmkwem oyiri ọdịyo faịlụ na a na nchekwa ma ya subfolders.
• Nkwado maka ọkọlọtọ CRC32 na faịlụ aha tụnyere, ịnara caching na integrated audio preview
•-awụ ọsọ n'ugwu, iPod na iPhone MP4, M4A, AAC audio formats nkwado.
N'ihi na Mac Ọrụ
Ọfọn Mac ọrụ maara ihe anyị na-ekwu okwu banyere mgbe ọ na-abịa oyiri tracks. Gịnị n'ezie pushes ị ezie bụ na ị nwere ike ghara ihichapụ niile nke ndị a duplicates na otu click, ma ọ bụ ike gị? Ọfọn ID3 Editor-elekọta na gị dị ka mma.
Wepụ oyiri Ngwá Ọrụ maka Mac
• Nanị pịa Auto Họrọ button ka ihichapụ hụrụ duplicates
• iṅomi gị Mac maka duplicates, ọbụna ma ọ bụrụ na ị nwere nnukwu storages!
• Chọpụta yiri faịlụ na ọbụna oyiri nchekwa n'ime gị esịtidem na mpụga faịlụ storages
• Preview dị iche iche faịlụ, kpọọ vidiyo na tupu ntị ọdịyo faịlụ
Kpọgharia aha ID3 Tags
Wepụ ID3 mkpado
Hichaa Music Library
Tọghata ID3 Tag
Olee otú Jikọọ RMVB Files ọsọ ọsọ na mfe
> Resource> Video> ID3 Editor - Hichaa Your Music Collections